July 28, 2020 12602
कुनै प्रतिभा केवल मार्गमा आउन ढिलाई भइरहेको हुन्छ, जब सहि बाटोमा पुग्छ त्यसपछि उस’ले आफैंलाई भेट्टाउँछ। हो नेपाली सिनेमा क्षेत्र कलिउडको बजार सानो छ। तर, कतिप’य नेपाली कलाकारहरु छन् जसले अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाउन सफल भएका छन।
नेपाली फिल्म उद्योग सानो भए पनि नेपा’ली स्टारले आफ्नो प्रतिभाको आधार’मा राम्रो अन्त’र्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हुन। १० नेपाली सेलिब्रेटी जो बलिउडमा सफल रहे।
नेपाली चलचित्रका प्रख्यात खलनायक सुनील थापा हिन्दी चलचित्रहरूमा पनि लोकप्रिय अनुहार बनेका छन्। राते काइलाका नामले प्रसिद्ध थापा मुम्बईमा मोडलिङ पछि अभिनयमा फर्के। उनले १९८१ मा फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ बाट डेब्यु गरेका थिए।
त्यसपछि उनले धेरै हिन्दी’ र भोजपुरी फिल्महरूमा पनि काम गरे। सन् २०१४ मा आएको प्रियंका चोपडाको फिल्म ‘मैरी कॉम’ले उनलाई एक फरक चिनारी प्रदान गर्‍यो। त्यसमा उन’ले प्रियंका’को प्रशिक्षकको भूमिका खेलेका थिए।
उनी सानी केटी हुन् जसले २०१४ मा नृत्य प्रतियोगिता ‘लिटिल मास्टर्स’को उपाधि जितेकी थिइन। उनी नेपालको रुपन्देही जिल्लाकी निवासी हुन्। तेरियाले ‘झलक दिखला जा सिजन ९’को उपाधी पनि जितेकी थिइन्।
नेपाली-इसाई परिवारमा जन्मेकी माला सिन्हा परिचित कलाकार हुन। हिन्दी सिनेमाकी दिग्गज मालाले आफ्नो अभिनय करियर बंगाली फिल्मबाट शुरू गरेकी थिइन्। पछि उनले नेपाली चलचि’त्रहरूमा पनि काम गरिन। बिस्तारै उनी हिन्दी चलचि’त्रतिर गइन् र उचाइ चुम्न थालिन।
माला सिन्हाले हिन्दी फिल्महरू जस्तै, ‘जीड’, ‘राधाका संगम’, सामका सिकन्दर’, ‘धन दौलत’, ‘बर्हम’, ‘कर्मयोगी’, ‘संजोग’ लगायतमा काम गरेकी छिन्।
१९७०मा रेडियो नेपालमा मैथि’ली लोक गायकको रूपमा आफ्नो करियर शुरू गरेका उदित नारायण आज बलिउडका सबैभन्दा सफल गायक मानिन्छन्। उनी नेपा’लको सप्तरी जिल्ला’मा जन्मिएका थिए। नेपाली संगीत क्षेत्रमा ८ बर्ष बिताएपछि झा बलि’उडमा प्रवेश गरेका थिए। बलिउडमा उनले सन् १९८० देखि आफ्नो करिअर सुरु गरे। आज उदित नारायण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित छन्।
फिल्म ‘बर्फी’मा तपाईले रणबीर कपू’रको साथीलाई याद गर्नुभएको छ? जो रणबीरको ला’गि आवाजका रूपमा काम गर्थे। उनी अरु कोही थिएनन् महान् नेपाली अभिनेता भोलाराज साप’कोटा थिए। फिल्म २०१२ मा रिलीज भएको थियो।
उक्त फिल्ममा रणबीर बाहेक, इलियाना डिक्रूज र प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकामा छन्। भोलाले यस फिल्म’मा सहयो’गी भूमिका निभएका छन्।
सुन्दर र प्रति’भाशाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफूलाई एक लोकप्रिय बलिउड अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित गरेकी’ छिन्। उनको परिचाय नेपालको उच्च घरानासँग सम्बन्धित छ।
मनिषाले आफ्नो आधा बाल्य’काल भारतमा बिताईन्। सुरुमा मोडलिङ गरेकी उनी त्यसपछि बलिउडमा प्रवेश गरिन्। ‘दिल से’, ‘सौदागर’ जस्ता धेरै हिट फिल्महरूमा मनिषाको उत्कृष्ट अभिनय देख्न सकिन्छ।
पूर्णिमा श्रेष्ठ बलिउडकी चर्चित पार्श्व गायक हुन्। उनलाई सष्मा श्रेष्ठका नामले समेत चि’निन्छ। उनले बाल कला’कारको रूपमा आफ्नो करिअर शुरू गरेकी थिइन्।
१९७१ मा रमेश सिप्पीको फिल्म ‘अन्दाज’मा श्रेष्ठले, ‘मै हैना ना बोलो-बोलो’गीतमा आवाज दि’एकी थिइन्। त्यपछि ‘तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्या हुआ तेरा वादा’मा पनि काम गरिन्। श्रेष्ठले माधुरी दीक्षितको फिल्मको प्रसिद्ध गीत ‘चन्ने के खेत मे’ मा पनि आवाज दिएकी छिन्।
गायक उदित नारायणका छोरा आदित्य नारायण झा भारतमा जन्मिएका र हुर्केका कलाकार हुन। नेपा’ली परिवारमा जन्मेका आदित्यले बलिउडमा आफ्नो प्रतिभाको बलमा निकै ठूलो ख्या’ति कमाए’का छन्। उनले बाल कलाकारको रूपमा हिन्दी फिल्ममा काम गरेपछि गाउन थालेका थिए। आज उनी पनि सफल गाय’कहरूको श्रेणीमा पर्छन्।
काठमाडौंकी झरना ब’ज्राचार्यले नेपालका धेरै सुन्द’री प्रतियोगिताहरूका उपाधी जितेकी छन्। उनले १९९७ मा मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। यस्ते उनले २००४ मा आएको फिल्म ‘लभ इन नेपाल’मा काम गरेकी थिइन्। जसमा सोनू नि’गम मुख्य भूमिकामा थिए।
नेपालको जनकपुरमा जन्मि’एकी उषा पौडेलले नेपाली चलचित्रमा काम गरिसकेपछि हिन्दी फिल्म उद्योगमा हात हालेकी थिइन्। धेरै संघर्ष पछि उनले बलिउडमा काम पाइन्। उनलाई ‘तुझ संग प्रीत लगाई सजना’, ‘जय जय जय बजरंग बली’, ‘अदालत’ जस्ता टिभी सि’रियलमा देख्न सकिन्छ । – हिमालयन
Prevविवाहपछी पहिलो पटक दयाहाङ राईसँग आँचल शर्माको भेट : हेर्नुहोस्
Nextह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ ! बन्यो नयाँ रकर्ड, आज कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्
मलेसियामा एक नेपाली युवतीको छुरा प्र’हार गरी ह’त्या
“भालेजुधाई’ का लागि खुट्टामा च’क्कु राखिएको भालेले मालिककै लियो ज्या’न
उर्मिलाको श`व लिएर घर पुग्दा परिवारको अवस्था यस्तो, दाजु र श्रीमानले यसो भने (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134670)